Nagarik Shukrabar - ‘विद्यार्थी विदेशिनु दुःखलाग्दो’
आइतबार, २८ असार २०७७, ०९ : २२
‘विद्यार्थी विदेशिनु दुःखलाग्दो’
आइतबार, १२ असार २०७३, ११ : ५० | दिलीप पौडेल , Kathmandu
धादिङमा जन्मिएर गाउँको विद्यालयबाट स्कुले शिक्षा लिएका डा. राजेन्द्र केसी अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेशकै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन फर्किएका व्यक्ति हुन् । सामाजिक, राजनीतिसँगै शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील साउथवेस्टर्न स्टेट कलेज, काठमाडौँका कार्यकारी अध्यक्ष डा. केसीसँग शुक्रवारले गरेको कुराकानीः
विद्यार्थी प्यारो कि परिवार ?
दुवैभन्दा काम प्यारो ।
विद्यार्थीबाट के सिक्नुहुन्छ ?
आफूलाई अपडेट गराउँछु ।
कति किताब पढ्नुभयो ?
हजारभन्दा बढी पुस्तक पढेँ ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पुस्तक ?
खप्तड स्वामीको खप्तड बाबा ।
व्यक्ति सफल हुन के गर्नुपर्छ ?
टिममा, टाइममा, रिजल्ट र एक्सन ओरिएन्टेड भएर काम गरे संसार जित्न सकिन्छ ।
विदेश घुम्दा के ल्याउन मन लाग्यो ?
यो विकास हाम्रो देशमा लैजान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ ?
सुत्नेबाहेक सधैँ काममा खटिन्छु । बिहान डेढ घण्टा स्वस्थ रहन समय दिन्छु ।
कसरी शिक्षा क्षेत्रमा आउनुभयो ?
लामो समय विकासमा काम गरेँ । अमेरिका पुगेर पीएचडी गरेँ । युरोप अमेरिकाको चलन एकेडेमिसियन भएपछि शिक्षामा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यही सोचले यहाँ आएर कलेज चलाएँ ।
यहाँको कलेजमा के कार्यक्रम छन् ?
नर्सरीदेखि पीएचडीसम्म अध्यापन हुन्छ । पीएचडीमा हामी अवार्ड गर्ने गरी होइन, विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्छौं । नेपालमा पीएचडी पढ्नेलाई न क्लास हुन्छ । न सुपरभाइजर पाउँछ । हेल्प डेस्कको रूपमा काम गर्ने गरेर हामीले कक्षा नै चलाएका छौँ ।
विद्यार्थीमा विदेश मोह किन ?
विद्यार्थीहरूमा लहरै चलेको छ । यो गलत हो । बहालवाला सचिव, मन्त्री, नेताले मेरो छोराछोरी बाहिर छ भनेर गर्व गर्छन् । विद्यार्थी या युवा विदेशिनु दुःख लाग्दो कुरा हो । कोरिया परीक्षामा ४० लाख युवा सहभागी भए । योभन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ ?
विदेश र स्वदेशको शिक्षामा अन्तर के ?
युरोप, अमेरिकामा सबैभन्दा राम्रो सरकारी कलेज, युनिभर्सिटी राम्रो । विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा गरेर पाएसम्म सरकारीमै पढ्छ । त्यहाँ नपाए बल्ल निजीमा । तर, यहाँ ठीक उल्टो छ । यहाँ निजीमा नपढे लाज हुने । यो दुर्भाग्य हो ।
शैक्षिक क्षेत्रका कमजोरी ?
सबैले प्राप्तांकको प्रतिशत हेर्ने गलत ट्रेन्ड बसेको छ । विद्यार्थीले कम नम्बर ल्याए खत्तम भन्नु नै गलत हो । एकेडेमिक कोर्स, नम्बर चाहिन्छ । तर, त्यसको अतिरिक्त जीवन जिउने क्षमता, कला आवश्यक छ ।
तपाईंहरूले नै यस्तो सिकाएको होइन र ?
हामीले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक बनाएका छौँ । विद्यार्थीलाई योग सिकाउछौँ, क्रिएटिभ क्लास दिन्छौँ, गाउँ घुमाउछौँ ।
शिक्षाले बेरोजगार उत्पादन ग¥यो भन्छन् नि ?
एकदम सही हो ।
त्यसको जिम्मेवार तपाईंहरू पनि त हो नि ?
हो, म त के भन्छु भने अहिलेको शिक्षाले ‘अनप्रोफेसनल’ मान्छे तयार गरेको छ । बेरोजगारकै कुरा, देशलाई हेर्नुस् न । अहिलेका हाम्रा नेता, प्रशासक यहाँकै उत्पादन हो । हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी पढेका सबै सफल व्यवसायी, सफल नेता, कुशल प्रशासक हुन्छन् । तर, हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेन ।
के सुधार्नुप¥यो त ?
हाम्रो शिक्षामा विकृति छ । यो सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले मात्र गरेर हुँदैन ।
समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
संसारमा सबैलाई एउटै समय छ । सामान्य व्यक्तिदेखि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पनि चौबीसै घण्टा हो । समयलाई चिनेर फरक ढंगले काम ग¥यो भने संसार चुम्न सक्छ । कसैले आफँैलाई चुम्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव: निजी क्षेत्रद्वारा ‘राहत प्याकेज’ माग
कोरोनाको कारण कच्चा पदार्थ तथा बजार अभावमा उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन्। चीनलगायतका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योग बढी प्रभावित छन्। विदेशी पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा होटल क्षेत्र सुनसान हुन थालेको छ। अधिकांश क्षेत्रमा रोजगारी कटौती भएको छ। कामदारलाई बेतलबी बिदा बस्न कम्पनीले निर्देशन दिएका छन्। गाडीको आयात र बिक्री घटेको छ। निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ।
‘आइएमई पे’को नयाँ योजना
आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित ‘आइएमई पे’ एपले ‘नेपालमा पैसा हातैमा पायो, सँगै ५० रुपैयाँको बोनस खायो’ योजना ल्याएको छ।
अर्थतन्त्रमा कोरोना सन्त्रास
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। कोरोनाको कारण नेपालमा मानवीय क्षति नभए पनि अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको छ।